မိုးနှောင်းကာလ ညကအိုက်စပ်ပေမယ့် ဒီညကလှတယ်.......
တိမ်ငွေ့တွေပြန့်ကျဲနေတဲ့ ကောင်းကင်မှာ တခြမ်းကွေးလလေးက ကပိုကရိုနဲ့ ခြေချိတ်ထိုင်နေတဲ့ မိန်းမပျိုလေးနဲ့တူတယ်....။
ကျွန်မ..... သူ့ဆီဖုန်းခေါ်ဖို့ သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာ ၄၉မိနစ်.....။
၉နာရီ ၉မိနစ်တိတိမှာ သူ့နာမည်နဲ့မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ဖိချလိုက်တယ်...။ Ring သုံးခါမြည်ပြီးချိန်မှာ သူ့အသံကိုကြားရတယ် ....။
"ဘယ်သူလဲ" တဲ့ ....
အေးလေ ရုတ်တရပ်ကြီး ဘယ်တုန်းကမှလည်းဖုန်းပြန်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ တရားသေမှတ်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆီက အသံကြားရတော့ စိတ်လှုပ်ရှားသွားမှာ အသေချာပဲ....။
သူမပြောနဲ့ ကျွန်မလည်း သူ့ဖုန်းကိုမခေါ်ခင် App နဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းကြည့်သေးတယ် တစ်ရာကျော်သွားလို့ လန့်ပြီး Heart rate app ကို delete ပြန်လုပ်ပစ်လိုက်တယ်....။
​သူကတော့ စီးကရက်နှစ်လိတ်နဲ့ ကုစားလိုက်တယ်ပြောတယ်...။
ကျွန်မနှလုံးခုန်သံကိုမကြားရလောက်ဘူးလို့ ယုံကြည်စိတ်အပြည့်နဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာပဲ သူနဲ့ စကားပြောဖြစ်ကြတယ်....။ အကြာကြီးပဲ ကျွန်မတို့စကားမပြောဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကာလတွေ....။
ဟိုအရင်ချိန်တွေတုန်းကဆို ဖုန်းဘေလ်ကုန်တဲ့အထိ စကားပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ညတွေရှိတယ်.....။ ကြာခဲ့ပါပြီ သူလည်းမှတ်မိမယ်မထင်တော့ပါဘူး.... ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သတိရနေလျက်နဲ့ လုံးဝအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲ နှစ်နဲ့ချီနေနိုင်ခဲ့ကြတာပဲ ....။
ဒီတစ်ခါ ဖုန်းပြောကြတော့ မတွေ့တာကြာလို့ထင်တယ် ပြောစရာတွေက စကားစပြတ်ပြတ်သွားတယ် တဒင်္ဂတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေမှာ သူ့ရဲ့မှင်သက်မှု စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်မှုတွေကို အမှောင်ထဲကနေ ခံစားမိနေချိန် ကျွန်မပြုံးဖြစ်သွားတယ်...။
သူ့စကားသံတွေ အရင်ကထက်ပိုလန်းဆန်းလတ်ဆတ်လာတယ်...။ အချိန်နဲ့ အသက်အရွယ်က သူ့ကိုပိုရင့်ကျက်လာစေခဲ့ပုံရပါတယ်...။ သူကတော့ လူကြီးပိုဆန်လာတယ် ကျွန်မကတော့ သူ့အတွက်အမြဲတမ်း ကလေးလေးပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် 😊
Good night…. ပါ Saturn 🪐
ကျွန်မတို့တွေ အသက်ရှင်နေသရွေ့တော့ လူချင်းဆုံဖြစ်ကြဦးမှာပါ....။
Posted by Cameron at 23:35 No comments:
💐 တရား ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲ ❓
🍂 🌿 🍂 🌿 🍂
အချို့တရားထိုင်ချင်တယ် ။ တရားမှတ်ချင်တယ် ။ နည်းစနစ်မသိလေတော့ ဆန္ဒရှိသော်လည်း အထမမြောက်ဘဲ ဖြစ်နေသောသူများနဲ့ စာပေနည်းကျကျရှုမှတ်ပွါးလိုသောသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
တရားဆိုတာ •••ထိုင်၍ဖြစ်စေ သွားရင်းဖြစ်စေ ရပ်လျက်ဖြစ်စေ လဲလျောင်း၍ဖြစ်စေ ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ် ။ အများနားလည်လောက်ပြီး အဆင်‌ပြေနိုင်လောက်မယ့်ထိုင်၍ရှုမှတ်နည်းလေးကိုပြောပြပါမယ် ။
ဦးစွာ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပါ ။ ဘုရားကို ဆီမီးရေချမ်း ပန်းစသည်ဖြင့်ကပ်လှူပါ ။ မိမိရတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့ဘုရားကန်တော့မေတ္တာပို့ပါ ဘုရားကန်တော့ပြီးလျှင်ဘယ်‌ ခြေထောက်ပေါ်ကိုညာ ခြေထောက်တင်ပါ ။ ဘယ်လက်ပေါ်ကို ညာလက်တင်ပြီးလက်မထိပ်ခြင်းထိထားပါ ။ ခါးကို ဆန့်ပြီးဖြောင့်ထားပြီးလျင်စိတ်ကို နှာသီးဝမှာထားကထွက်လေ ဝင်လေ ရှု့ပါ ။ ထွက်လေ ဝင်လေ ရှု့နေရင်း ...........
(၁) ထွက်လေ ဝင်လေ လေးကို ရှု့နေတာက ( ကာယာနုပဿနာ )
(၂) ဝမ်းနည်းတယ် ၊ ဝမ်းသာတယ် ၊ ချမ်းသာတယ်၊ ဆင်းရဲတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးကို ရှု့နေတာက ( ဝေဒနာနုပဿနာ )
(၃) ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ဖြစ်တဲ့လောဘနဲ့ ယှဉ်တွဲလာတဲ့စိတ်၊ ဒေါသနဲ့ ယှဉ်တွဲလာတဲ့စိတ်၊ မောဟနဲ့ ယှဉ်တွဲလာတဲ့စိတ် ဒီစိတ်ကလေးကို ရှု့နေတာက ( စိတ္တာနုပဿနာ )
(၄) ကြံတွေးမှု ၊ ကြံစည်မှုတွေ၊ ရုပ် ခန္ဓာ ဓာတ်သဘောတွေကို ရှုနေတာက ( ဓမ္မာနုပဿနာ )
အဲ့ဒီလို မိမိသန္တာန်မှာရှိတဲ့ သဘာဝတရားတွေကို အမှန်မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ် ။
၁။ အဲ့ဒီ အမှန်မြင်အောင် ကြည့်တာကိုပဲ ( သမ္မာဒိဋ္ဌိ ) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ အမှန်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်...
၂။ ( သမ္မာသင်္ကပ္ပ ) ဆိုတဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားတတ်ဖို့ လိုတယ်။
၃။ အဲ့ဒီလို မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားတတ်ဖို့အတွက် ( သမ္မာဝါယာမ ) ဆိုတဲ့ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်တယ် ။
၄။ အဲ့ဒီလို ကြိုးစားဖို့ အတွက် ( သမ္မာသတိ ) ဆိုတဲ့ စိတ်စိုက်ဖို့ လိုတယ် ။
၅။ အဲ့ဒီ သမ္မာသတိ ခေါ်တဲ့ အာရုံ တစ်ခုထဲမှာ စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားတာက ( သမ္မာသမာဓိ ) ပါ။ ဒီလိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ မဂ္ဂင် ( ၅ ) ပါး ကို " ကာရာပကမဂ္ဂင် ( သို့ ) ကာရကမဂ္ဂင်"လို့ ခေါ်တယ်။
တရားဓမ္မ ကျင့်ကြံ ကြိုးကုတ် အားထုတ်တဲ့အခါ ဒီ မဂ္ဂင် ( ၅ ) ခုဟာ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ အလုပ်လုပ်သွားပြီ ဆိုရင်ဖြင့် သဘာဝတွေကို အမှန်အတိုင်း သိနိုင်မှာဖြစ်တယ် ။
ဆိုကြပါစို့၊ ထွက်လေ ဝင်လေလေးကို ရှုမှတ်နေတယ် ဆိုရင် ထွက်လေ ဝင်လေလေးကို သူ့သဘာဝလေး အတိုင်း မသိသိအောင် ကြိုးစားတာဟာ (သမ္မာဝါယာမ )အဲ့ဒီ ထွက်လေ ဝင်လေလေးကို အမြဲတမ်း သတိကပ်ထားတာက ( သမ္မာသတိ ) ထို ထွက်လေ ဝင်လေ အာရုံ တစ်ခုထဲပေါ်မှာ စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားတာက( သမ္မာသမာဓိ )ထွက်လေ ဝင်လေလေးရဲ့သဘာဝကို စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာက ( သမ္မာသင်္ကပ္ပ ) ဟော... အဲ့ဒီလို လေးခု ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘာပေါ်လာတုန်း ဆိုရင် ထွက်လေ ဝင်လေလေး ရဲ့သဘာဝတရားကို အမှန်မြင်လိုက်တဲ့ ( သမ္မာဒိဋ္ဌိ ) ဆိုတာ ပေါ်လာတော့တာပါပဲ ။
ဘာကို_အမှန်မြင်သလဲ ဆိုတော့ ထွက်လေ ဝင်လေလေးဟာ သူ့သဘာဝ ထွက်လေ ဝင်လေပဲ၊ " ငါမဟုတ်ပါလား "ဆိုတဲ့ အယူမှန်သွားတာကို ( သမ္မာဒိဋ္ဌိ ) အမှန်မြင်ခြင်းလို့ ခေါ်တယ်။ ငါမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အမြင်ဟာ အမှန်မြင်ပေါ့ ။
အဲ့ဒီ_အမှန်မြင်လိုက်တဲ့အခါ ရုပ် နာမ် ဓမ္မ သင်္ခါရတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး " ငြီးမွေ့မှု "ဆိုတာ ပေါ်လာတယ် ။ ငြီးငွေ့လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း " တွယ်တာမှု "ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး ။ တွယ်တာမှုမရှိတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် " လွတ်မြောက် "သွားတာပဲ ။
အဲ့ဒီလို အဆင့်ဆင့်အကျိုးရှိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားက ကာယ ၊ စိတ္တ ၊ ဝေဒနာ ၊ ဓမ္မ လို့ဆိုတဲ့ သတိပဋ္ဌာန် အာရုံ လေးပါး ပေါ်မှာ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ဘယ်အချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ အားလပ်တဲ့ အချိန်လေးမှာ အာရုံစိုက်ပြီးတော့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခုနကပြောတဲ့ အသိဥာဏ်တွေ အားလုံး ပေါ်လာကြမှာပါတဲ့။
အဲ့ဒီလို_ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ဝိမုတ္တိ " လွတ်မြောက်မှု " ဆိုတာကို ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit >> Original uploader
,မေတ္တာဖြင့် Ashin Thu Mingala
ဣမိနာ ပုည ကမ်မနေ သဗ်ဗ အန်တရာယောဝိနဿတု ။
💘#Credit to HTET OO HLAING .
Posted by Cameron at 17:02 No comments:
ဇာတ်သိမ်းဆိုလို့ ဘယ်လို ဇာတ်သိမ်းသွားတဲ့အကြောင်း ရေးပြမှာမဟုတ်ပါဘူး ကြည့်လို့ပြီးသွားကြောင်း လာအကြောင်းကြား....။ Mr. Sunshine K series ၂၄ပိုင်းကို ခြောက်ရက်လောက်ကြည့်ရတယ်...။ နောက်ဆုံးနေ့ကို မနက် ၂:၃၀ ထိမအိပ်ဘဲ အပြီးသတ်ကြည့်လိုက်တယ်...။ မင်းသားသုံးယောက်လုံးသေ ...အမလေးငိုရတာ မျက်လုံးတွေမို့အစ် မျက်နှာသုပ်ပုဝါ တစ်ထည်လုံးနီးပါးရွှဲ....။ ဇာတ်လမ်းလင့်ပို့ပေးသူလေးကို မနက်သုံးနာရီထိုးခါနီးကြီး ကျေးဇူးတင်စကားပါးရတယ်...။ နောက်တကား "Squid Games” ဆက်ကြည့်ပါဦးမယ်...။ Thrillers အမျိုးစားပေမယ့် ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်....။ မနက်ကျတော့ သူမက်ဆေ့ပြန်ပို့ထားတယ် "ဇာတ်သိမ်းကတော့ သိပ်မကောင်းဘူး မဟုတ်လား"တဲ့....။
တကယ်တော့ .... အမွှေးရနံ့ရလိုက်တာ ... တေးသံသာတစ်ခုကိုနားဆင်လိုက်ရတာ.... အရသာရှိတဲ့အစားစာ စားလိုက်ရတာ ... အမှတ်ရစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတာ... စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်လိုက်ရတာ... ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်လိုက်ရတာ.... စတာတွေဟာ တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်မဟုတ်ဘူး... ထို့အတူ Mr. Sunshine နဲ့ဆုံတွေ့ရတာ ကိုယ်ကို ရုပ်ရှင်ကားတွေ စီးရီးစ်တွေကြည့်ဖို့ ပို့ပေးခဲ့တာတွေလည်း တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူး...သူ့အချိန်အခါနဲ့သူ ကျိုးကြောင်းသင့် ရောက်လာခဲ့တာချည်းပဲ...။
ဥပမာ စာရေးဆရာခက်ဇော်ရဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး စာအုပ်နှစ်အုပ်ထွက်ပြီး မကြာခင်ပဲ ကျွန်မတို့ဟာ အမှန်တရားအတွက် အဓမ္မထက် ဓမ္မကိုရွေးချယ်ပြီး တော်လှန်နေကြချိန်ဖြစ်တယ်.....။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ မတရားအာဏာသိမ်းခံပြီး ရှစ်လအကြာမှာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်ခွင့်ရတာဟာ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ဖို့ လှုံ့ဆော်တဲ့အနေနဲ့ Guardian Angel ကပို့ပေးတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုလို့ပဲမှတ်တယ်....။ သမိုင်းနောက်ခံ Historical Romance Drama ကားအမျိုးအစား အနေနဲ့တကယ်ပြီးပြည့်စုံပါတယ်....။ မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် spoil မလုပ်တော့ဘူးနော်...။
ကျွန်မကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရွေးပို့ပေးတတ်တဲ့ Mr. Sunshine လေးကိုလဲ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါတယ်....☺️
Posted by Cameron at 08:51 No comments:
နတ်တွေဟာနေ့စဉ် အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါ လူ့ပြည်မှာ လူတွေ ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာ မိမိရဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်က တင်ပြပေးရတယ် ။
အဲထဲမှာ ကုသိုလ်တကာ့ ကုသိုလ်ထဲတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော ဝိပဿနာကျင့်ကြံ့အားထုတ်သူကိုမြေစောင့်နတ် ရေစောင့်နတ် တောစောင့်နတ်နတ်အမျိုးမျိုးက အင်မတန်စောင့် ရှောက်ပေးရတယ်။ စောင့်ရှောက်မပေးရင် အထက်က နတ်မင်းကြီးတွေက အပြစ်ပေး ဒဏ်ခံရတယ်။
အရင်ကလည်းပြောဖူးတယ် မနက်ဖြန်မှာ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ဂြိုလ်တခုခုဝင်တိုက်ပြီး ပျက်စီးမယ်ဆိုပါစို့... လူတယောက်ယောက်ကများ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတရားတွေကျင့်ကြံ့နေရင် ကမ္ဘာပျက်မဲ့နေ့ကို နတ်တွေဗြဟ္မာတွေက ရက်ရွေ့ပေးရတယ်။ အဲလူဟာ အရိယာဖြစ်မှပဲ ကမ္ဘာကြီးက ပျက်ပေးရတယ်။
ဘုရားရှင်ခေတ်တုန်းကလည်း သံဃာတပါးက ဝိပဿနာအားထုတ်နေရင်း မကြာခင် ရဟန္တာဖြစ်တော့မယ့်အချိန်အခါဖြစ်လေသည်။ မွန်းလွဲပြီးမှ ရဟန္တာဖြစ်ရင်ဆွမ်းမစားလိုက်ရမှာဆိုးလို့ နေနတ်သားကြီးကနေကို ရပ်တန့်ပေးထားပြီး ရဟန္တာဖြစ်မှပဲ မွန်းလွဲပေးရတဲ့အထိ့ စောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာလည်း တကယ်တရားကျင့်နေတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်နတ်သားနတ်သမီးတွေက လာလာဖူးကြသတဲ့။
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ကို အသာထားဦး ဝိပဿနာတကယ်ကျင့်နေလျင်ပင်သင့်အနီးအနားမှရှိတဲ့ ဘုမ္မစိုး ရုက္ခစိုးရွာစောင့်နတ်တွေ နယ်စောင့်နတ် နတ်အမျိုးမျိုးတွေကသင့်ကို စောင့်ရှောက် ကယ်တင်ပေးရတယ်။ သင်ဒုက္ခရောက်ရင် လာကူညီပေးရတယ်။
အခြားကုသိုလ်တွေ လုပ်ရင်လည်း စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ သို့သော် သင်ဟာ နတ်တွေကို အမျှပေးဝေဦးမှအမျှဝေလည်း နတ်တွေဟာ သာဓုခေါ်နိုင်ဦးမှဖြစ်သည်။ နတ်တပါးက ကြားရင် သင့်ကို တပါး စောင့်ရှောက်.မယ်သို့သော် အဲ့နတ်က သင်ဘယ်သွားသွားအမြဲတမ်းတော့ စောင့်ရှောက်နိုင်မှာ မဟုတ်။
ဝိပဿနာအားထုတ်သူကြတော့ တလောက လုံးမှာရှိတဲ့နတ်တွေက သင်ဘယ်သွားသွား စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်။ သင်မနောစိတ်က ဘာလိုချင်လဲ ဥပမာ အစားအစာဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေလျင်ပင်နတ်တွေက လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီး ဆွမ်းလာကပ်တဲ့အထိ အင်မတန်စောင့်ရှောက်ကြတယ်။
#ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ တရားတော်များမှ🙏🙏🙏
Posted by Cameron at 13:37 No comments:
နှစ်စပိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလမှာ တင်ထားတဲ့ Give Away for my beloved readers ပို့စ်မှာ လက်ဆောင်ပေးရမယ့် စာဖတ်သူ US ကအစ်မတစ်ယောက် စလုံးက ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့ NPD ကညီမတစ်ယောက်ကို The Guys of Rangoon နဲ့ Guys From Mandalay စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ခုမှပို့ဖြစ်သွားတယ် ကြားထဲမှာ အင်းဝက စာအုပ်ကုန်သွားလို့ ပြန်မရိုက်ရသေးတာနဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် လတွေအများကြီးကြာသွားခဲ့တယ်...။ ဒါနဲ့ September ထဲမှာ သုံးနေရာစလုံးကို ပို့တာ အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်....။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာလာဖတ်တဲ့ အစ်မတွေ ညီမတွေ အစ်ကိုတွေ မောင်တွေ အားလုံးကို.....။ သူတို့တွေအတွက် ကျွန်မရဲ့ Reflection တစ်ခု....။
ကျွန်မလက်ရှိကိုင်နေတဲ့ ခေါက်ထီးလေးအကြောင်းပြောပြဦးမယ် .....။ ဒီခေါက်ထီးကို လက်ဆောင်ရထားတာ သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ.....။ ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကလက်ဆောင်ရတဲ့ထီးပါ အပြင်မှာဘယ်နေရာမှာမှဝယ်လို့မရတဲ့ Limited Edition အရည်အသွေးကောင်းတယ် သုံးမိုးရှိပြီ သုံးနေတာ အထဲက ထီးရိုးတံတွေက ဘာမှမဖြစ်ဘူး ခလုတ်နဲ့ဖွင့်ရတဲ့ထီးမို့ ဆောင်းရတာအဆင်ပြေတယ်....။ ကျစ်လစ်ခိုင်ခန့်မှုရှိတယ် အရွယ်အစားကလဲ အနေတော်ပဲ သိပ်မသေးလွန်း မကြီးလွန်းဘူး....။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်မအိမ်ကထွက်တော့ မိုးရွာလို့ အဲထီးထုတ်ဆောင်းရတယ်....။ ကျွန်မတို့နေတဲ့ တာဝါရဲ့ ဘေးကပ်ရပ်က Tower A ဖက်မှာ ညီမဝမ်းကွဲနှစ်ယောက်ရဲ့အခန်းတွေကို တစ်ပတ်တစ်ခါ နှစ်ပတ်တစ်ခါ သွားကြည့်ပေးရတယ် သူတို့ကစလုံးရောက်နေကြတော့ ကျွန်မကို သော့အပ်ထားကြတယ်....။ ပထမအခန်းသွားစစ်တော့ ထီးကိုကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့ မှတ်မှတ်ရရ အဲအခန်းရဲ့ ထမင်းစားပွဲပေါ်ကိုတောင်မတင်ဘဲ ကိုင်ထားခဲ့တယ်....။ ပထမတော့ စားပွဲပေါ်တင်မလို့ ပြန်ထွက်ရင်မေ့ကျန်ခဲ့မှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့ သတိနဲ့ကိုင်ထားခဲ့တာ.....။ နောက်တစ်ခန်းရဲ့တံခါးသွားဖွင့်တော့ ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း အခန်းအဝင်ဝ ဖိနပ်စင်မှာ ကျွန်မတင်ထားပြီး မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ခေါက်ထီးလေးကိုပြန်တွေ့ရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်........။
နောက်နေ့တွေကျ ထီးပျောက်လို့လိုက်ရှာတာ နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်.....။ အဲအခန်းထဲဝင်စစ်ခဲ့တာကို လုံးဝမေ့သွားခဲ့တယ် ပထမခန်းကိုသွားပြန်ကြည့်သေးတယ်....။ ဒုတိယအခန်းက တစ်လနေမှတစ်ခါစစ်တော့ သူ့ကိုမေ့သွားတယ်...။ ကိုယ်ထိုင်တဲ့ရုံးခန်း Showroom ကားထဲ ရှာတာ ရှာတာ အော် ဉစ္စာပျောက်ငရဲရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ဟိုထင်ဒီထင် ဈေးဝယ်ရင်းပဲကျန်ခဲ့တာလားနဲ့ အတွေးတွေများပြီး နောက်ဆုံးစိတ်လျှော့လိုက်တယ်...။ ကျွန်မက တော်ရုံပစ္စည်းလောက်ကို အဲလောက်အစွဲလန်းမထားဘူး ခုထီးလေးက ရှားပါးလေးမို့ Soul Mate ကပေးထားတာမို့ နှမြောနေမိတယ်....။ နှစ်ပတ်ကျော် မေ့လိုက်ပြီးတော့မှ တစ်ညမှာ ဘုရားရှိခိုးပြီး တရားထိုင်မှာစလုပ်တော့ အာရုံထဲအဲဒီအခန်းလေးဖျတ်ခနဲပေါ်လာတယ်...။ ကာတွန်းတွေထဲမှာရေးသလို အတွေးထဲ မီးသီးလေးလင်းသွားတယ်....။ နောက်နေ့သွားကြည့်တော့ ခေါက်ထီးလေးကို ဖိနပ်စင်လေးမှာပြန်တွေ့တယ်....။
ကျွန်မသောက်နေကျ အုန်းသီးဂျယ်လီဖတ်လေးတွေပါတဲ့ VeVe မဟုတ်တဲ့ တခြားတံဆိပ် အုန်းရေဘူးလေးရှိတယ် ....။ ကျွန်မတို့တိုက်ရှေ့က စတိုးဆိုင်လေးမှာရောင်းတယ် တစ်ကပ်ကို ၃၅၀၀/-....။ အဲလိုပဲ ကိုယ်ကြိုက်ပြီဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဝယ်တော့မယ်ဆို ပြတ်ပြီ....။ အဲဒါနဲ့သောက်ချင်နေပေမယ့် မရှိလို့ မသောက်ရဘူး....။ မရှိလဲမသောက်ဘူး ရှိရင်ဝယ်သောက်မယ် ဆန္ဒ အာသီသက ပြင်းပြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး.....။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်နေတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲ အုန်းရေပုလင်းလေးနှစ်လုံးတွေ့လိုက်တယ်....။ ကျွန်မမောင်လေးက ကျွန်မအတွက်ဝယ်ထည့်ထားပေးတာ....။ ဖဘမှာလည်း ကျွန်မတို့ မြို့နယ် Group အဖွဲ့ရှိတယ်...။ အဲမှာ ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေ စားစရာရောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ....။ မီတာရုံးရှေ့မှာ ရောင်းနေကျ စမူစာသုပ်သည် နေ့လည်၂နာရီကစပြီး ဖုန်းနဲ့မှာစားနိုင်ပါပြီ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးပါတယ်တဲ့....။ အဲဒါလေးစားချင်လိုက်တာလို့ စိတ်ကဖြစ်မိတယ် တစ်ရက်လောက်မှာစားဦးမယ်လို့တေးထားပြီး မမှာဖြစ်ဘူး....။ အဲလိုစိတ်ထဲဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လောက်ကျတော့ ကျွန်မမောင်လေးကညနေအလုပ်ကပြန်လာလို့ သူဖြတ်လာတဲ့လမ်းမှာ လူကြိတ်ကြိတ်တိုးဝယ်နေကြလို့ ကောင်းမယ်ထင်ပြီး ကျွန်မအတွက် စမူဆာသုပ်တစ်ပွဲဝယ်လာပေးတယ် ပဲရည်လေးနဲ့....။ အဲလိုကိုယ်တောင်းတမိတာလေးတွေ ရက်ပိုင်းမှာဆန္ဒပြည့်လာတတ်တာကို သတိထားမိတယ်...။
မေတ္တာတရားဟာ တန်ခိုးရှင်လိုပါပဲလားလို့ အောက်မေ့မိတယ်....။ အရင်ကတော့တွေးမိတာ ငါလုပ်ပေးသလောက်ပြန်မရဘူး ရောင်ပြန်ဟတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်မရှိဘူးလို့ထင်ထားခဲ့တာ....။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် တစ်ခုခုပြန်ရရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာထက် စိတ်စေတနာအပြည့်အဝနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှဟာ ကိုယ်ဆီ Reflection ပြန်လာတယ်ဆိုတာကို ခုချိန်မှသေချာ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ခန္ဓာသိနဲ့သိသွားခဲ့တာ....။ တခြားအရာကိုခဏထားဦး ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲ ခေါင်းစခြေဆုံး သတိလေးနဲ့သိအောင်နေကြည့်ကြည့် ထူးခြားတာတွေကို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွေ့ရတတ်တယ်...။ Miracle ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ပိုသတိထားမိလာတယ်....။
တလောက တရားထိုင်ရင်း မမဝသုန်ကို ဆံထုံးမှာ တရုတ်စကားပန်းအနီရောင်လေးတစ်ပွင့်ပန်ထားတာမြင်လိုက်တယ်....။ ကျွန်မ အရေးကြီးတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ချင်းဆီကို တရားထိုင်ပြီး မေတ္တာလှိုင်းပို့တဲ့အလုပ်ကို ဒီဝါတွင်းမှာစလုပ်ခဲ့တာ အရင်ပို့စ်တွေမှာရေးဖူးခဲ့ပါတယ်....။ မမကို ပြန်ပြောပြတော့ သူတကယ်ပဲ စကားပန်းအနီလေးပန်ထားခဲ့တာတဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေတော်တော်တက်နေပြီပဲလို့ ကျွန်မကိုသူပြောတယ်...။ တကယ်တော့ ကျွန်မက ခုမှ လမ်းအစကိုရှာနေတုန်း မူကြိုအဆင့်တောင်မရှိသေးပါဘူး....။ နောက်တစ်ရက် မမဝသုန်ကို အရင်မြင်နေကျ အပြုံးလှလှနဲ့ အနက်ရောင်ဇာလက်ပြတ်လေးဝတ်ထားတာတွေ့တယ်....။ ဇာပန်းအကွေးလေးမှာ ကတ္တီပါဖောင်းကြွလေးတောင်ပါတယ်လို့ အသေးစိပ်မြင်တယ်....။ မမကိုအဲလိုဝတ်ထားတာဟုတ်လားလို့ ကျွန်မ ခုထိမမေးကြည့်ရသေးဘူး....။ ဒီပုံရိပ်ကို တရားမထိုင်မီ ဘုရားစာရွတ်နေတုန်းမြင်လိုက်တာပါ...။ အပြုံးတွေကြည့်ရတာတော့ စိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုခုကြုံရလို့ ဒီလိုနှစ်နှစ်ကာကာအပြုံးမျိုးကိုဖော်ပြတာလို့ ယူဆမိပါတယ်....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခက်ခဲတဲ့ စိတ်ဆင်းရဲစရာ ဒီလိုကာလမျိုးမှာ တစ်နေ့တာအတွက် အပြုံးတစ်ခုရဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး....။
ကျွန်မ တရားထိုင်တာ တစ်နေ့ကို ၁၅မိနစ်ပဲရတယ်....။ ဟိုတစ်လက ညာဖက်ပေါင် တင်ပါးဆုံအဆစ်နာတာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်လို့မရဘူး အဲဒါနဲ့ လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ဒူးနာဖူးလို့သောက်ခဲ့ရတဲ့ Mega ကထုတ်တဲ့ Joint Ace ဆေးတစ်ဘူးဝယ်သောက်ဖြစ်တယ် အလုံးသုံးဆယ်ပါတာ တစ်ရက်နှစ်လုံး ၁၅ရက်ဆက်တိုက်သောက်လိုက်တာ ခုလမ်းလျှောက်လဲမနာတော့ဘူး အဲမတိုင်ခင်က လမ်းလျှောက်ရင်ကြာကြာရပ်ရင်တောင်နာတာ...။ အဲဆေးသောက်ပြီးသွားတော့ မနာတော့ပေမယ့်လဲ တရားထိုင်ရင် အကြာကြီးမရတော့ဘူး.....။ လူဆိုတာ အို နာ သေ ဘေးမလွတ်ဘူးဆိုတာပဲ....။ တရားတွေရပြီးရင်းရ.....။ တရားစထိုင်ရင်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ် ဘာတွေမှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ နည်းလေး ပို့စ်တင်ပေးပါဦးမယ်.....။
Posted by Cameron at 17:48 No comments:
Posted by Cameron at 14:10 No comments:
ဒီသီချင်းကို Thai the mask singer တစ်ခုကနေသိလိုက်ရတာ....။ အမျိုးအစားက ကျွန်မကြိုက်တဲ့ R&B ...။ ထိုင်းမှာ The mask singer season 1,2,3,4 ပြီးရင် The mask singer mirror တို့ The mask singer ထိုင်းဘုရားပွဲတို့ The mask singer Line Thai တို့ အစုံပဲသူတို့ တစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူအောင် ပွဲစီစဉ်တတ်ကြတယ်...။ The mask singer Project Aကတော့ ကိုးဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန် နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲ...။ အခု ကျွန်မဒီသီချင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့ The Mask Singer (ဝမ်းအခဒီထိုင်း) ကတော့ ထိုင်းရိုးရာပွဲတော်လို့ ဘာသာပြန်ရတာ မှန်လားတော့မသိဘူး....။ အဓိပ္ပါယ်သိတဲ့ ထိုင်းကစာဖတ်သူတွေ ကော်မန့်မှာလာပြောပေးနော်....။ အဲဒီ The Mask Singer မှာ အနိုင်ရသွားတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်က ပထမဆုံး စုံတွဲ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေပဲဖြစ်တယ်...။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ 9x9 Project မှာတုန်းက Boy Band Group ကိုးယောက်မှာပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်နှစ်ယောက်ပါ...။ 9x9 Project ပြီးတော့ခုလောလောဆယ်အချိန်အထိ Trinity ဆိုတဲ့ အဆိုတော်လေးယောက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Boy Band မှာ ဆိုနေပါတယ်...။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ခု ထိုင်းရိုးရာပွဲတော် The Mask Singer 2019 မှာ ချန်ပီယံရသွားခဲ့တဲ့ Porsche နဲ့ Jackie Jackrin ပဲဖြစ်ကြပါတယ်....။ သူတို့ဟာ အဲပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်တဲ့အချိန်တုန်းက အသက် ၁၈ ၁၉ လေးတွေပဲရှိကြသေးပေမယ့် အဆိုပညာကတော့ တကယ့်ဆရာကြီးတွေပါ....။ ဒီ "တစ်ခါက" ထိုင်းလို "ကန်လခရမ်းနင်" "Kan Lakarang Naing" ဆိုတဲ့သီချင်းကို ပြန်ဆိုထားတာ အရမ်းမိုက်တယ် Rapping တွေလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးဖြည့်ဆိုထားတာ....။ Posrche က Rap ဆိုတယ် Jackie က မယ်လိုဒီ....။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အဆိုပညာက မျက်နှာဖုံးအောက်မှာ ဒိုင်တွေဘယ်သူမှ သူတို့ကို ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတွေလို့ အစပိုင်းမှာမထင်မှတ်ထားကြဘူး....။ ဒီကလေးတွေ ဒီလောက်မဆိုနိုင်ပါဘူးပေါ့...။ ဒီသီချင်းလေးဆိုတဲ့အချိန်က သူတို့ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး Final ပဲ ...။ ဒီသီချင်းကို ပြိုင်ဖို့သက်သက်မဟုတ်ဘဲ သူတို့တကယ်နှစ်သက်တဲ့သီချင်းဖြစ်လို့ နောင်တစ်ချိန်မှာ တစ်ခါက ဒီ The Mask Singer စင်ပေါ်မှာ ပါဝင်သီဆိုခွင့်ရခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ တစ်သက်လုံးအတွက် အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင် ရွေးချယ်သီဆိုခဲ့ကြတာလို့ သူတို့ပြောပြခဲ့တယ်...။
မူရင်းအဆိုရှင်တွေကတော့ R&B အဆိုတော် Stamp နဲ့ featuring က Palmy ဆိုပေးထားပါတယ်...။ MV လေးမှာကြည့်ကြည့်နော်....။ မူးရင်းဆိုထားတာဒီလောက်ကောင်းပြီးသားကို အဲကလေးလေးနှစ်ယောက်က ပိုလှအောင်ဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့အရည်အချင်းမဟုတ်ဘူး....။ Music arrangement လုပ်ထားတာကလဲ အပျံစားကြီး ထိုင်းတူရိယာနဲ့ mix လုပ်ပြီးတီးမှုတ်ထားတာတွေက တော်တော်လှတာ...။ သူတို့လေးတွေကိုကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်က တကယ်တော်တဲ့ ကလေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်တဲ့ ထိုင်းက Grammy လို တေးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတွေရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်...။ အာရှ Music Industry မှာ ကိုးရီးယား တရုတ် ထိုင်ဝမ်ပြီးရင် ထိုင်းလည်း အတော်အောင်မြင်တယ်.....။ သူတို့ဆီက အဆိုတော်တစ်ယောက် You Tube မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်တင်ရင် Viewer တွေက သန်းရာနဲ့ချီတဲ့အထိရကြတယ်....။ ကိုယ်တွေဆီမှာတော့ 100K 500K ကေနဲ့ပဲစကားပြောနေတုန်း မီလီယံတွေမလာသေးဘူး....။
ပြီးတော့ The Mask Singer ပြိုင်ပွဲဟာ ရွက်ပုန်းသီး အနုပညာရှင်တွေကို ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ ဘယ်ပွဲမှာမှကိုယ်အဆိုပညာကိုပြခွင့်မရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေပေးထားတဲ့ပွဲပါပဲ....။ Pop အဆိုတော်တစ်ယောက်ဟာလည်း သူကြိုက်တဲ့ Hip hop သီချင်းဆိုခွင့်ရတယ် .... ။ Rapper တွေလဲ R&B တွေဆိုချင်ဆိုမယ် ....။ ကန်းထရီးအဆိုတော်လဲ ပေါက်ကွဲပစ်မယ့် Rocker ကြီးတွေလုပ်လို့ရတယ်....။ R&B ဆိုနေကျလူလဲ Crackသံသုံး metals ဆိုမယ်ကွာ ...။ အဲလို သူတို့ပရိတ်သတ်တွေ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ပုံစံနဲ့ ဆိုနည်းပညာတွေကို မျက်နှာဖုံးအောက်ကနေ Surprise လုပ်ရတာ အရသာတစ်မျိုးပေးနိုင်သလို သူတို့ဘဝမှာ ဆိုချင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းအမျိုးအစားကိုလဲ ဆိုပြနိုင်တယ်အဲလိုပေါ့...။
Born: May 7, 1998 (age 23 years), Bangkok, Thailand
Music group: Nine by Nine
Education: Ramkhamhaeng Advent International School, Thammasat University
Record labels: 4NOLOGUE, Kamikaze
First Name: Jackrin
Family Name: Kungwankiatichai
Native name: จักริน กังวานเกียรติชัย
Also Known as: Jackie;แจ๊คกี้
Born: March 29, 2001
မူရင်း - Stamp featuring Palmy
တစ်ခါက တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ ဆုံတွေ့ ကြည်မွေ့ ခဲ့ရဖူးတယ်........
တစ်ခါက ကိုယ်တို့တွေ အနီးဆုံးမှာရှိခဲ့ကြဖူးတယ်......
ဒါပေမယ့် တစ်ခါက ကိုယ်တို့တွေ နောက်ဆုံးတော့ ဇာတ်သိမ်းမှာ မျှော်လင့်သလိုမဖြစ်ခဲ့ရဘူးကွယ်....
တစ်ခါက ကိုယ်တို့တွေမတူညီတဲ့ လမ်းတွေပေါ်ဆက်လျှောက်ဖို့ ဘဝက ရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်
ကိုယ့်ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ကိုယ် ဝေးခဲ့ကြပြီပဲ .....
ဝေးခဲ့ကြတာမှ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဆုံခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမရှိခဲ့သလိုပါပဲ....
ကောင်းကင်က မိုးတွေရွာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နဘေးမှာ ဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူး.... အဲဒီမိနစ်ပိုင်းလေးမှာ အရေးပါတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ စိတ်ထဲပေါ်လာခဲ့တယ်.....
အဲဒီတစ်ချိန်တစ်ခါက အဖြစ်တွေက ခုထိရင်ထဲနွေးထွေးနေတုန်းပဲ သူကိုယ့်အနားမှာ အနီးဆုံးရှိနေတယ်လို့ ခံစားမိနေတယ်.... ပြီးတော့ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီး သက်ပြင်းချမိတယ်....
တကယ်တော့ ကိုယ်တို့တွေက ဘယ်တုန်းကမှမဝေးခဲ့ကြပါဘူးကွယ်..... အမှတ်ရမှုတွေထဲမှာ ကိုယ်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပြုံးတွေဖလှယ် ခွန်အားတွေပေးနေခဲ့ကြတာမဟုတ်လား
အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလည်း တစ်ခါကဆုံခဲ့ကြရတာတွေအတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးရပါတယ်....
အဲဒီမှာ နေကောင်းကျန်းမာနေပါရဲ့ မဟုတ်လား....
ကိုယ်လည်းပဲ ဒီနေရာလေးမှာ အရင်တိုင်းရှိနေပါတယ်...။ မင်းကိုလည်း နေ့တိုင်း သတိရနေပါတယ်......။
တစ်နေ့နေ့တော့ ကိုယ်တို့ ပြန်ဆုံကြရမှာပါ.......
Posted by Cameron at 19:59 No comments:
ခရမ်းသီး 🍆 ၇ လုံး
ကြက်ဥ 🥚 ၃လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ 🧄 ၄ မွှာ
ဆား 🧂 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
သက်သတ်လွှတ်မှိုဟင်းခတ်မှုန့် လဖရဇွန်း ၁ဇွန်း
နေကြာဆီ 🌻 ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်း
အရင်ဆုံး ခရမ်းသီးတွေကို ရေစင်အောင် ဆေးပြီးမီးဖုတ်ပါ အဆင်ပြေသလို ကြိုက်ရာမီးဖိုသုံးပါ ....။ ကျွန်မက Oven ထဲထည့်မဖုတ်ဖြစ်တာက အချိန်ကြာလို့ Gas မီးဖိုနဲ့ပဲသုံးပါတယ် ...။ ခရမ်းသီးတွေကျက်ရင်အအေးခံပြီး အခွံခွာ အစေ့ထုတ် နုတ်နုတ်စင်းထားပါ...။ ဇလုံတစ်ခုထဲထည့် ကြက်ဥတွေဖေါက်ထည့် ဆား ဟင်းခတ်မှုန့်ထည့် အမွှေးကြိုင်ရွက်တွေကြိုက်ရင်လဲထည့်လို့ရတယ်နော် နံနံပင်တို့ ပင်စိမ်းရွက်တို့ ရှမ်းနံနံတို့ ကြိုက်ရာထည့် သုံးမျိုးလုံးလဲထည့်လို့ရတယ်....။ ခရင်းနဲ့သေချာလေးမွှေပြီး ခလောက်ပေး....။ မကြော်ခင် ၁၅မိနစ်လောက်နှပ်ထားပေး...။ ဒယ်အိုးပူလာရင် ဆီထည့် ကြက်သွန်ဖြူအပြားရိုက်နုတ်နုတ်စင်းထားတာထည့်ကြော် မွှေးလာရင် ခရမ်းသီးနဲ့ကြက်ဉခေါက်ထားတာထည့်ကြော်မယ် ....။ ခရမ်းသီးထဲက ရေတွေထွက်လာလိမ့်မယ် ရေတွေခမ်းသွားတဲ့ထိ မီးကို Medium မှာပဲထားပြီးကြော်ပေးပါ....။ ရေခြောက်သွားရင်တော့ ကိုယ်နှစ်သက်သလို အပျော့ကြိုက်ရင် သိပ်ခြောက်အောင်မကြော်ပါနဲ့ နဲနဲ ရွှေအိုရောင်သန်းတာလေးစားချင်ရင်တော့ နဲနဲဆက်ကြော်ပေးပါနော် ရပြီဆို ထမင်းပူပူလေးနဲ့စား...။ ကြက်ဉမွှေကြော်အနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ခရမ်းသီးရဲ့အချိုဓါတ်နဲ့ သိပ်စားကောင်းပါတယ်လို့ ညွှန်းပါရစေ...။
အစေ့တွေမယူနဲ့နော်ထုတ်ပစ်ပါ အသားကိုပဲယူပြီး တောက်တောက်စင်းထား
Posted by Cameron at 11:452comments:
ပထမဆုံး street artist အာဖဂန်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် လက်ရာများ
တာလီဘန်တွေ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကို ဘယ်လိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုတာ မသေချာကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ အပြင်လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ သူတို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ ခက်နိုင်ပါတယ်။
Shamsia Hassani ဆိုသူဟာ Kabul University မှာလေ့လာသင်ကြားနေတဲ့ ပန်းချီပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ ပထဆုံးအမျိုးသမီး street artist တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့လက်ရာတွေကို canvas တွေပေါ်မှာ ရေးဆွဲရုံမက စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဗုံးကြဲအဆောက်အအုံ့ရဲ့ နံ့ရံတွေပေါ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Hassani ရဲ့လက်ရာတွေဟာ အမျိုးသားများလွှမ်းမိုးသော လူ့ဘောင်တွင် အမျိုးသမီးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဌကို သရုပ်ဖော်ရုံတင်မက သူမရဲ့အိမ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာရဲ့ အလင်းနဲ့အမှောင်ထုကြားက တိုက်ပွဲကို တစ်စေ့တစ်စောင်း ဖော်ပြထားတာပါ။
Shamsia Hassani ကို 1988 ခုနှစ်မှာ အီရန်ရှိ အာဖဂန်မိဖတွေဆီကနေ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဘဝအစပိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဥပဒေအရခွင့်မပြုခံရတဲ့ သူမဟာ အာဖဂန်မှာပဲ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ “သူတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက် အီရန်နိုင်ငံမှာ အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုတာကို ကျွန်မမှတ်မိနေသေးတယ် အစိုးရကခွင့်မပြုပေးတာကြောင့် ကျွန်မမိဖတွေ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖို့ အရမ်းကိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် ဒါပေမယ့် ငယ်သေးတော့ ဒါတွေကို သိပ်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ သူမဟာ အာဖဂန်နစ္စကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ 2010 ခုနှစ်မှာတော့ Kabul မှာ Combat Communication ကနေပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ graffiti workshop တစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒါက ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာမှာ သူမကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ “Berang မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၉ ယောက်နဲ့အတူ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် Combat Communication က UK မှ graffiti အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ CHU ကို ဖိတ်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်” လို့ သူမရဲ့အခွင့်အလမ်းအစကို ပြောလာခဲ့တာပါ။
“ကျွန်မဒီအလုပ်ကို တကယ်နှစ်သက်ခဲ့တယ် ဒါက အရမ်းကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ် graffiti က ကျွန်မမြို့ရဲ့စစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့နံ့ရံတွေကို အရောင်အသွေးစုံတဲ့ ပန်းချီကားတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့တယ် အရောင်တွေက ကျွန်မမြို့ပေါ်က စစ်ပွဲဇာတ်လမ်းတွေကို ဖုံးကွယ်ပေးလိမ့်မယ် လူတွေဟာ ကျဉ်ဆံနဲ့ အက်ကွဲကြောင်းတွေအစား အမြင်သစ်တွေကို တွေ့မြင်ရမှာပါ ပြပွဲတွေကို တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ လူတွေအတွက် ကျွန်မရဲ့အနုပညာကိုခံစားဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် သူတို့ဟာအသစ်တစ်ခုခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ အခွင့်အလမ်းရနိုင်ပါတယ် တစ်ချို့က အဲဒီရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ဖျော်ဖြေမှု ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်” လို့ သူမရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Shamsia ဟာ သူမရဲ့လက်ရာတွေကိုဖန်တီးဖို့ သူတို့နိုင်ငံဟာ အန္တရာယ်များလာတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖြန့်ဝေဖို့အပြင်မထွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမရင်ဆိုင်ရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကွဲလွဲချက်တွေလည်း ရှိလို့နေပါတယ်။ “အာဖဂန်နစ္စတန်ကလူတွေဟာ အနုပညာကိုဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူတို့က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်ကြပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်မအပြင်မှာ graffiti လုပ်နေတာကို တွေ့တဲ့အခါ သူတို့ကမကောင်းတဲ့စကားတွေ၊ ကျိန်ဆဲတာတွေ လုပ်ကြပြီး တစ်ချို့ကဒါကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆိုကြတယ် public နေရာတွေမှာ ပန်းချီဆွဲတဲ့အခါ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတာနဲ့ မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားလာရတယ် ဒါကြောင့်ဒီကနေ ထွက်သွားရတယ် တကယ်လို့ကျွန်မ နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက် အချိန်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မဖန်တီးမှုတွေက ပိုကောင်းမှာပါ ဒါပေမယ့် လုပ်နိုင်တာက ဆယ့်ငါးမိနစ်အတွင်း ရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုကို ဖန်တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်မပြီးသေးတဲ့ အပိုင်းအစတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ” လို့ အခက်အခဲတွေကို ပြောလာပါတယ်။
“တစ်ခြားပြသနာကတော့ နေရာမရှိတာပါ ဘယ်သူကမှ သူတို့ရဲ့နံ့ရံပေါ်မှာ ပန်းချီဆွဲတာကို မလိုချင်ကြဘူး သူတို့ကြိုက်တာတစ်ခုခု ဖန်တီးပေးရင်တော့ လက်ခံကြပါတယ် ကျွန်မရဲ့အနုပညာတွေကို မလိုချင်ဘူးလို့ လာပြောကြတာတွေလည်း ရှိတယ် ဒီနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ တိုးတက်လာတာနှေးကွေးပေမယ့် အလားအလာအရမ်းကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အခြေအနေတွေက ပိုဆိုးသွားပြန်ပါပြီ နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ရလဒ်က ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး” လို့ ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ Shamsia ဟာလုံခြုံပေမယ့် သူမရဲ့စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းမှုတွေအတွက် သူမရဲ့တိုင်းပြည်ကနေ ထွက်ခွါခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မရဲ့ဖန်တီးမှုမှာ ဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ် သူမကလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်မကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို ပိုနားလည်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အမျိုးသားတွေထက် ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီး ရှိပါတယ် ကျွန်မရဲ့ဇာတ်ကောင်မှာ ပိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးတွေက ကြည့်ကောင်းတဲ့အရာတွေမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီး ဝမ်းနည်းမှုကိုမခံစားနိုင်တော့အောင် အရာအားလုံးကို လျစ်လျူရှုဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးနေပြီး နာကျင်မှုနဲ့ ဝမ်းနည်းမှုတွေ၊ အတိတ်နဲ့ အနာဂတ်အတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့ သူမရဲ့ဇာတိမြေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှုကို တိုက်ထုတ်နေတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ပုံကို ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်”....။
Photos fromm shamsiahassani's instagram
Posted by Cameron at 13:47 No comments:
ကိုမျိုးကျော့ရဲ့ Common Sense ဆိုတဲ့ Page, face book မှာရှိတာ တော်တော်များများသိကြမယ်ထင်တယ်...။ ကျွန်မက Common Sense ကို You Tube မှာ Subscribed လုပ်ထားတယ်....။ Telegram မှာလဲ သုခိတာချောရဲ့ Spiritual Friends မှာ Join ထားတော့ ချောက ကိုမျိုးကျော့ သူ့ကို မေးခွန်းမေးချင်ရင် မက်ဆေ့ပို့ထားပေးလို့ ပြောလာလို့ အခု 3.9.2021 မှာ Common Sense You Tube မှာ ချောမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ့လို့ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်....။ တခြားညီမလေးတွေမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ နားထောင်ဖြစ်တယ်....။ ချောဆိုတာ မလေးရှား ကိုတာဘာရူးမှာနေတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းပါ....။ အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ကျွန်မဘလော့ကို အမြဲလာဖတ်တဲ့ USA က မမစံထားခိုင်လည်း ချောရဲ့ face book friend တစ်ယောက်ပဲ....။ ဆရာဝင်းနဲ့အမေးအဖြေတွေကို Common Sense ရဲ့ Face Book သို့မဟုတ် You Tube တွေမှာ သွားနားထောင်လို့ရပါတယ်....။ ရောဂါကပ်ကြီးက နောက်လေးငါးလလောက်ဆိုရင် မှေးမှိန်သွားတော့မှာပါ နောက်ဆက်တွဲ စစ်ဘေးကပ်နဲ့ အစာရေစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးကပ်ကတော့ ဒီရောဂါကပ်လောက်မဆိုးနိုင်ဘူးတဲ့....။ ဒါ့ပြင် ကမ္ဘာမှာ ငလျင်လှုပ် ရေကြီးတာတွေ ဖြစ်ဦးမှာ....။ ပင်လယ်ရေလှိုင်းမြင့်တက်ပြီး မိုင်၂၀ လောက်ထိ ရေလွှမ်းတာတို့ တနည်းအားဖြင့် လူဦးရေတွေကို လျှော့ချပစ်တဲ့သဘောပါပဲ.....။ အဲချိန်တွေကို အကုန်ကျော်လွန်ပြီးသွားရင်တော့ မေတ္တာတရားတွေပြည့်ဝတဲ့ လူတွေပဲရှင်ကျန်ရစ်မယ် ကမ္ဘာဟာ ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ အသစ်တဖန်ပြန်လာမယ် အဲလိုပေါ့....။ အဲအချိန်ကလဲ ခန့်မှန်းထားတာ 2028 April နောက်ပိုင်းမှ.....။
ဆရာကြီးကတော့ ခုချိန်မှာ မေတ္တာသုတ်တွေရွတ်ခိုင်းတယ် ပြီးတော့ ဉုံ ကိုရွတ်ခိုင်းတယ်....။ အဲဒါလေးပြောပြချင်တယ်....။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ထဲက မေတ္တာသုတ်ကို ကျွန်မအသက် ၂၅နှစ်တုန်းကစပြီး အလွတ်ကျက်ခဲ့ဖူးလို့ ခုချိန်ထိ နှုတ်တိုက်ဘယ်ချိန်မဆို ရွတ်နိုင်ခဲ့တယ်....။ အဓိပ္ပါယ်ကိုတစ်ခါထဲသိနားလည်ရင်းနဲ့ ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါတယ်....။ ကျွန်မ အဲချိန်တုန်းက တက္ကသိုလ်တွေ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်စလုပ်နေတဲ့အချိန်လဲဖြစ်တယ်.....။ အလုပ်ထဲမယ် အလုပ်အကိုင်အပြောအဆို အဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီး အကူလာလုပ်ပေးတဲ့ မတင်တင်မြင့်ဆိုတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က ကျွန်မကို ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုပ်စာအုပ်လေး လက်ဆောင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်....။ အဲထဲမယ် မေတ္တာသုတ်ကို အရင်အလွတ်ကျက်ခဲ့တာ ခုချိန်ထိ ကြည်ညိုစွာရွတ်ဖတ် ပူဇော်နေမြဲပါပဲ....။ အလုပ်တစ်ခုခုအဆင်မပြေတိုင်း လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုစရာရှိတိုင်း ရွတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်....။ တကယ်လဲ အစွမ်းထက်ပါတယ်....။ ဒေါသထွက်နေတဲ့သူ မျက်နှာကို သေချာမြင်ယောင်ကြည့်ပြီးရွတ်ပေးရင်တောင်မှ အဲလူတဖြေးဖြေးအေးချမ်းမှုရသွားတယ်...။ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အားကိုးရှိတိုင်းလည်း ရွတ်ဆိုပူဇော်ဖြစ်တယ်...။ ယုတ်စွအဆုံး ရုံးက မီးခံသေတ္တာနံပါတ်လေးလွဲသွားလို့ ဖွင့်ရခက်တဲ့အချိန်တောင် ခလုတ်လေးလှည့်ရင်း မေတ္တာသုတ်ရွတ်တာ ချက်ချင်းပွင့်သွားတဲ့အခါမျိုး .....။ တကယ်တော့ မီးခံသေတ္တာ ဖွင့်မရတာနဲ့ မေတ္တာသုတ်နဲ့တော့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ကျွန်မက ယုံကြည်ကိုးစားမှုအပြည့်နဲ့ ရွတ်ဆိုလိုက်လို့ အကျိုးပြန်ပေးတာ ချက်ချင်း....။ အဲဒါမျိုးက တစ်ခါနှစ်ခါမဟုတ်ဘူး အမြဲသတိထားမိနေခဲ့တာ.....။
ဝါတွင်း သုံးလဆို ကျွန်မက အရင်နှစ်တွေဆို ဂုဏ်တော်ကိုးပါး ပုတီးစိပ်အဓိဌာန်ဝင်ဖြစ်တာများတယ်....။ ဒီနှစ်တော့ ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဲအဓိဌာန်ကိုမဝင်တော့ဘဲ ဘုရားရှိခိုးနေကျအတိုင်း ဩကာသသုံးကြိမ်ရွတ် ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည် ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကန်တော့ပြီးတာနဲ့ စင်္ကြာဝဠာတိုက်တစ်သောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါနဲ့ ဝေနေယျ အပေါင်းတို့အတွက် မေတ္တာသုတ် ကိုးကြိမ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါရစေဘုရားလို့ တိုင်တည်ပြီး နတ်ပင့်ပြီး ကိုးခေါက်ရွတ်ဆို မေတ္တာပို့ အမျှဝေ နတ်ပို့ အဲဒါတွေကို အခုနှစ် ဝါတွင်းသုံးလမှာလုပ်ဖြစ်နေတယ်....။ အခု ဆရာဝင်းက မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပေးပါလို့ ပြောမှ ကိုယ်လဲ ဝါဝင်ကတည်းက ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖြစ်နေပါလားလို့ ယှဉ်တွဲသတိထားမိလိုက်တယ်....။ ကိုယ့်ရဲ့ Guardian Angel (ချောသုံးနေကျစကားနဲ့ဆို ကိုယ့်ရဲ့ Higher Self) ကိုယ့်ကို မသိမသာလေး လမ်းညွှန်ပြသနေပါလားလို့လဲ အံ့ဩမှင်တက်မိတယ်....။
အရင်ကဆို Face Book မှာ တင်တာတွေ အမြင်မတော်တာတွေဆို SS ယူပြီး IG Story မှာ ပြန်ပြန်တင်ပြီး နဲနဲဆဲစရာရှိတာ ဆဲဖြစ်တယ်....။ ခုတော့ အဲအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး လိမ္မာနေပြီလို့ပြောရမလား....။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်း စိတ်ကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်မယ့်ဟာတွေ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်တတ်သွားတယ်.....။ တစ်ခါတစ်လေ မနေနိုင်လို့ IG မှာ ကောက်ရေးနေပြီ ပြီးမှပြန်ဖျက်ပစ်တာမျိုးပေါ့....။ သူတစ်ပါးကိုရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော စိတ်ကိုညစ်နွမ်းစေမယ့် အရာတွေ ရှောင်တတ်လာတယ်....။ တနည်းအားဖြင့် အကုသိုလ်အလုပ်ကိုနည်းတထက်နည်းအောင်လုပ်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်....။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာ ကိုယ်စောင့်နတ်ကောင်းနဲ့နတ်ဆိုးအားပြိုင်ချိန်တွေကိုလဲ ကြုံရတတ်တယ်...။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာ ခက်သလောက် မကောင်းတာကျတော့ အလွယ်ကလေး စက္ကန့်ပိုင်း မိနစ်ပိုင်းမှာလုပ်တတ်တာကိုလဲ သတိချပ်မိလာတယ်...။ တကယ်တွေးကြည့်တော့ ခုမှသေမှာကြောက်လို့ ထလုပ်တာလဲမဟုတ်ဘူး.....။ လူဖြစ်လာတဲ့ တစ်လျှောက်မှာ ခုချိန်ထိ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်မထားခဲ့ဖူးဘူး.....။ ရင်ဆိုင်ရတာချင်းအတူတူ ကပ်သုံးပါးကို အောင်မြင်စွာ တည်ငြိမ်စွာ ကျော်လွှားချင်တယ် အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ မေတ္တာတရားပြည့်ဝတဲ့ သူတွေနဲ့ဆုံတွေ့ချင်သေးတယ် သက်တမ်းစေ့မသေခင်လေးမှာပေါ့ ဒါပါပဲ....။
PS: မနက်က ကော်ဖီသောက်ရင်း NUG page က ဒုသမ္မတကြီး Live နဲ့ မိန့်ခွန်းပြောသွားတာ နားထောင်ဖြစ်တယ်....။ D-Day စကြေငြာတဲ့နေ့ စွမ်းအားပြည့်တဲ့ New Moon စတဲ့နေ့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သယ်ဆောင်လာတော့မှာပါ မကြာခင်မှာပဲ စောင့်မျှော်ကြပါစို့...........။
Posted by Cameron at 10:25 No comments:
ကျွန်မဘဝမှာ ကိုယ်အရမ်းနှစ်သက်တဲ့စာရေးဆရာရဲ့စာအုပ် ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အရမ်းဖတ်ချင်နေတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရလိုက်တာဟာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုရလိုက်တာလိုမျိုးကို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ရတယ်....။ Iph အသစ်တစ်လုံးရရင်တောင် အဲလောက်မပျော်ဘူး....။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ် ကိုယ်နားထောင်ချင်နေတဲ့ သီချင်း ကိုယ်ကြည့်ချင်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ကိုယ်အရမ်းစားချင်နေတဲ့ အစားအစာ ဒါမျိုးများရလို့ရှိရင်တော့ အပျော်ဆုံးအချိန်ပဲ....။
မနှစ်က ဗယ်လင်တိုင်းမတိုင်ခင် စပ်ခွန်ဇ စာအုပ်ကို အမှတ်မထင် အင်းဝမှာတွေ့လို့ဝယ်လိုက်တယ် အဲတုန်းက စပ်ခွန်ဇဆိုတဲ့စာရေးသူကိုလဲ တစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး သူ့စာလဲမဖတ်ဖူးခဲ့ဘူး အဲဒီစာအုပ်က "ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ချစ်တယ်" ဆိုတဲ့စာအုပ်....။ အဲတုန်းက ကျွန်မ သူ့စာအုပ်ထဲက ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ စာပိုဒ်လေးတွေကို အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးဖူးခဲ့သေးတယ်...။ ဒီစာအုပ်ကတော့ စပ်ခွန်ဇရဲ့ ဒုတိယစာအုပ်ကလေး သူ့ချစ်သူကို အိမ်နဲ့တင်စားပြီးရေးထားတဲ့ သူရဲ့လွမ်းချင်းတွေ ကျွန်မကြိုက်တဲ့ High Light လေးတွေကိုရေးပြပေးသွားမယ်....။
တဖျတ်ဖျတ်လွင့်နေမယ့် မင်းဆံပင်တွေ .....
အိပ်မက်ထဲမှာ ခဏ ခဏမက်သော ထွက်သွားတဲ့ ခြေသံတွေ..
ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ဘဲ နွေရဲ့ ခြေသံဖွဖွလေးဟာ
အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ကျန်ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ
မခေါ်ဘဲ ရောက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ
ဝင်မလာခင် ကြိုခံစားရတဲ့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့နိုင်သော နွေရာသီတွေ.....။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီဒဏ်ရာနွံတွေထဲ နစ်နေဦးမှာ
ရောက်လေရာရဲ့ နေဝင်ချိန်တိုင်းကို ငေးရင်း
ကျွန်တော်ဟာ အအေး မိနေသော ဆောင်းဦးရာသီလေးပါပဲ
သူလိုက်သောက်တဲ့အခါ အတိုင်းအဆမရှိ ပျော်မိတာမျိုးပေါ့
ထုတ်မပြခဲ့တဲ့ အချစ်တွေက ပိုလွမ်းဖို့ကောင်းပါတယ်....။
အလွမ်းတွေ ညို့နေတဲ့ ညနေတိုင်း
ကျွန်တော်အမြဲပြန်ချင်ခဲ့သော အိမ်ဟာ မယ်ပေါ့....
မယ်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုက အိမ်ပါပဲ
ကျွန်မမစစ်မှန်ဘူးလို့ ခံစားရသော အရာတွေကို
အဲဒီအိမ်လေးဆီ ဘယ်တုန်းကမှ မသယ်သွားချင်ခဲ့
ခင်ဗျား စိတ်လိုလက်ရရှိတဲ့ အချိန်မျိုးမှာမှ
ဒါက ကျွန်တော့်လက်ကျန် လူ့သက်တမ်းကို
စိတ်ကူးနဲ့ ဖူးတဲ့ နှင်းဆီဖြူတွေကလည်း
ရင်ထဲမှာတော့ ငါမခြွေဘဲ ကြွေခဲ့တဲ့
ပြန်စိုက်ပျိုးလို့ မရတော့လေသော အိပ်မက်ဟောင်းတွေပါပဲ....
အိမ်ကို လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် ပြန်ပြေးဖူးလား
ဒီမှာတော့ မိုးတွေ သိပ်ရွာနေတာပဲ မယ်ရယ်....
ပြန်စရာ အိမ်မရှိတော့တဲ့ ခံစားချက်ကို
ကိုယ့်အိမ်လေးကို ငိုယိုပြီး ပြောပြရဦးမယ်.....။
ဝေးဝေးကပဲ အစောကတည်းက ငေးပါတယ်
အခုတော့ တစ်ဘဝလုံး စိုထိုင်းသွားစေနိုင်လောက်သော အမှတ်တရတွေနဲ့
မြင်လေးသမျှဟာ နင်ကျင်စရာအသွင်ပဲ ရှိတော့တယ်.....။
စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်ဘဲ မိုင်တွေ အများကြီးအထိ
အရက်တွေ မူးပြီး အသည်းကွဲသီချင်းတွေ အော်ဆိုလိုက်
ကျွန်တော်က ခင်ဗျားကောင်းကင်မှာ လင်းလက်ခဲ့ဖူးပါတယ်
ဒါပေမယ့် အစောကြီးကြွေသွားရတဲ့ ကြယ်လေးပေါ့.....
ဒီလိုနဲ့ ငါဟာ ....
Posted by Cameron at 19:33 No comments: